I-Toshiba ithengisa imemori yecandelo le-chips kwaye i-Apple inokunciphisa iindleko zokuvelisa Ndisuka mac
Ubeneenyanga zothethathethwano. Kodwa I-Bain Capital Consortium yokuthatha isahlulo sememori yeToshiba. Idijithali yaseNtshona ibichasene ekuqaleni njengoko ibibanjelwe eToshiba kwaye omnye wabathengisi bayo kwimarike, iHynix, ngebexhamle kolu kuthengwa. Nangona kunjalo, izinto zifike kwiziqhamo kunye nesivumelwano se-18.000 yezigidi zeedola (malunga 15.000 million).
I-Bain Capital Consortium yenziwa, phakathi kwabanye, ziinkampani zetekhnoloji ezinje ngeDELL, Seagate, Kingston okanye Apple. Ngale ntshukumo, abo baseCupertino baya kuba nakho ukunciphisa iindleko kwaye babe nokuzimela ngakumbi kubantu besithathu. Kwakhona ngenisa ishishini apho Isamsung yindlovukazi yecandeloNjengakwisihloko sezikrini ze-OLED, apho isiKorea sesinye esibonelela ngezikrini ze-iPhone X entsha.Kwaye inyani kukuba iinkumbulo zeNAND zibaluleke kakhulu kwiApple, ngakumbi kwicandelo lokuhamba; Zizinto eziphambili ekwenziweni kweemveliso ezinje nge-iPhone okanye i-iPad.
UToshiba ebenexhala lezemali kangangeenyanga; Ilahlekelwe yimali eninzi kwicandelo layo lamandla enyukliya eMelika kwaye iziphumo zamva nje ziqinisekisile oko kwakulindelwe: ibibhengeza ukubhengezwa njengongenamali kwicandelo layo lenyukliya. Ke ngoko, ukuze uqhubeke kwaye ukwazi ukufumana imali, UToshiba uthathe isigqibo sokubeka icandelo lememori yecandelo lokuthengisa.
Nangona kunjalo Kwakukho nabanye abadlali kwimibutho yababandakanyeki kubandakanya iDijithali yeDijithali kunye neFoxconn Technology, Iibhanki ezinamatyala zibeke uxinzelelo kuToshiba ukuba afikelele kwisivumelwano ngaphambi kokuphela kukaSeptemba. Ukuba akunjalo, inkampani yaseJapan yayingcakaza ngaphandle kweTokyo Stock Exchange ukuba ayifumananga zinto zingaphelanga le kota yezemali. Emva kokugqiba olu thethwano, UToshiba uya kuqhubeka nokugcina isibonda esincinci kwisahlulo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Toshiba ithengisa imemori yecandelo le-chips kwaye i-Apple inokunciphisa iindleko zokuvelisa
IiKaravishini Alejandro sitsho
Apho aha ... Yile nto bayithethileyo nge-iPhone 5C
Phendula kwiCaravantes Alejandro
Ngaba sele unayo iMacOS ePhakamileyo yeSierra efakwe kwiMac yakho? [Uvoto]